Kooxda Anderlecht Oo Daqiiqadihii Ugu Dambeeyay Ciyaarta Bar-Baro Ku Qabtay Man United Iyo Xiddigaha United Oo Niyad jab Kala Soo Laabtay Belgim – Kooxda.com
Home 2017 April Europa League, Ingiriiska, Wararka Maanta Kooxda Anderlecht Oo Daqiiqadihii Ugu Dambeeyay Ciyaarta Bar-Baro Ku Qabtay Man United Iyo Xiddigaha United Oo Niyad jab Kala Soo Laabtay Belgim
Kooxda Anderlecht Oo Daqiiqadihii Ugu Dambeeyay Ciyaarta Bar-Baro Ku Qabtay Man United Iyo Xiddigaha United Oo Niyad jab Kala Soo Laabtay Belgim
April 13, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kulan aad u xiiso iyo xamaasad badan ayaa dhex maray kooxda Anderlecht iyo Man United kulankaas oo ka tirsanaa lugtii 1-aad ee wareega 8 dhamaadka tartanka Europe League.
Labada kooxood ayaa soo bandhigay kulan indho qabatin leh oo ay labada kooxoodba ku doonayaan sidii ay guul ku gaari lahaayeen.
Kooxda Man United ayaa daqiiqadii hore weeraro deg-deg ah ku qaaday kooxda Anderlecht iyada oo uga dan lahayd in ay goolal dhaliso bilowga kulanka si ay kooxda Anderlecht u niyad jabto.
United ayaa daqiiqadii 37-aad heshay goolkeedii 1-aad iyada oo uu u dhaliyay xiddiga khadka dhexe ee Henrik Mkhitaryan isaga oo kubad xoogan oo uu goolhayah Anderlecht soo tuuray ka faa,iidaystay oo shabaqa dhex dhigay kulankana ka dhigay 1/0 ay United hogaanka ku qabato.
Kooxda Anderlecht ayaa isku dayda in ay iska soo bado goolka waxana ay qaaday weeraro rogaal celis ah iyada oo waliba orod ku daraysay laakiin waxa u suurto gali wayday in ay dhaliso goolka Bar-baraha.
Waxa ugu dambayntii 1/0 ku soo afmeermay qaybtii hore ee ciyaarta oo ahayd mid xiiso leh oo ay Man United hogaanka kulanka ku hayso.
Qaybtii dambe ayaa ku bilaabatay mid xiiso kale leh xilli ay kooxda Anderlecht ahayd kooxda weerarka badan qaadaysay iyaga oo doonaya in ay keensadaan goolka bar-baraha laakiin daafaca United ayaa u diiday in ay gaaraan goolkooda.
Goolhayaha kooxda Anderlecht ayaa isna mucjiso ku noqday xiddigaha Man United isaga oo ka badbaadiyay goolal cadaan ahaa oo ay xiddigaha United dhalin kareen waliba isaga oo dhow jeer kubado gool loo filanayay si cajiib ah uga badbaadiyay.
Kooxda Anderlecht ayaa kadib dadaal badan heshay goolka bar-baraha daqiiqadii 86 iyada oo uu gool madax ah oo qurux badan u dhaliyay xiddiga Leander Dendoncker kulanka ka dhigay bar-baro 1/1 ah dibna kulanka ugu soo celiyay kooxdiisa
Waxana sidaas ku soo dhamaatay ciyaar xiiso lahayd oo ay labada kooxoodba muujiyeen in ay ka dhabtayahay in ay meel fiican ka gaaraan tartankan waxana ay ku heshiiyeen 1/1 iyaga oo isku balansan garoonka Old Trafforf oo lagu ciyaari doono lugta 2-aad.